Fanafihana mitam-piadiana Soavinandriana Omby 19 mitentina 20 tapitrisa ariary lasan’ny dahalo
Andavamamba Mpanendaka roa lahy indray no tratra
Lehilahy roa, 23 sy 21 taona no voasambotry ny polisy miasa ao Isotry omaly 19 martsa 2 noho ny resaka fitondrana zava-maranitra teny an-dalambe sy fanafihana mitam-piadiana.
Nahazo vahana indray ny halatra omby tato ho ato. Nitrangana fanafihan-dahalo mitam-piadiana ny alarobia hifoha alakamisy teo, sahabo ho tamin’ny 12 ora alina, tao Ambodimanga, kaominina Ankaranana, Distrikan’i Soavinandriana.
Dahalo enin-dahy nirongo basy vita gasy no nandroba omby miiisa 19 mitentina 20 tapitrisa ariary mahery ana raim-pianakaviana sahabo 50 taona. Nanapoaka basy ireo malaso nampihorohoro ny mpiray tanàna, ka tsy nisy sahy nifanehitra tamin’ny dahalo noho ny hery tsy mitovy. Ny feom-basy sy ny dian’omby no nahalalana fa nianavaratra ny tanàna ireo jiolahy nandroaka ireo biby fiompy. Nidina teny an-toerana ny zandary avy ao Ankaranana nanatanteraka ny vonjy taitra sy ny faharahan-dia niaraka tamin’ireo fokonolona. Efa nampandrenesina ihany koa ireo tobin’ny zandary manodidina. Raha ny fampitam-baovao ofisialin’ny zandarimariam-pirenena, tsy mbola hita ireo omby. Tsy nisy ihany koa ny aina nafoy sy naratra.